वुहान सम्झेर रुनेहरूका लागि फर्किएको वसन्त- ब्लग - कान्तिपुर समाचार
वुहान सम्झेर रुनेहरूका लागि फर्किएको वसन्त
चीनमा महामारीमा सर्वसाधारणको जीवनलाई महत्त्व नदिने र कामका लागि आलटाल/ ढिलासुस्ती गर्ने उच्च अधिकारीहरू तुरून्त बर्खास्त गरिएका छन् । नेपालमा त्यस्तो कानुन कतिखेर लागू भएको छ?
जेष्ठ ५, २०७८ लक्ष्मी लम्साल
बेइजिङ — ‘कुनै पनि नेताले जनतासमक्ष गरेका वाचाहरू पूरा गरेर देखाउनुपर्छ’ भन्ने चिनियाँ मान्यता छ। यसबारेमा भन्ने हो भने नेपालमा पनि यस्तै मान्यता छ, ‘गरेका वाचा निभाउनुपर्छ।’ सहकर्मी ललितासँग राजनीतिक वाचामा अडिग रहने नेतृत्वको चरित्रका विषयमा एउटा छायांकन चल्दै थियो।
चीनको हुबेई प्रान्तको राजधानी वुहान । तस्बिर : पाइतु
गत अप्रिल २७ मा नेपाललाई स्वास्थ्य सहयोग दिने चिनियाँ वचनको २ हप्तामा अर्थात् मे ११ तारिख चिनियाँ स्वास्थ्य सामग्रीको पहिलो खेप काठमाडौं पुगिसकेको थियो। भिडियो खिच्दाखिच्दै पृष्ठभूमिमा एउटा ठूलो आवाज माइकबाट आएपछि हाम्रो काम अवरूद्ध भयो।
वुहानमा कोरोना महामारी देखिएपछि के कस्तो प्रयासमा नियन्त्रण गरिएको थियो भन्ने विषयको वृत्तचित्र हेर्नका लागि निम्त्याइएका हामी सोही मौकामा सिनेमा हलको बाहिरपट्टि यस्तो खालको भिडियो बनाइरहेका थियौं। काम अधुरै राखेर हामी सो हलभित्र प्रवेश गर्नुपर्ने भयो।
वुहानमा कोरोना देखिँदाको प्रारम्भिक चरण, विचलित मानिसका मनोदशा, देशबाट परिवारसँग बिछोडिएर फ्रन्टलाइनमा खटिन हिँडेका चिकित्सकहरू, अभाव र संकटका बेलामा उत्पन्न जनआक्रोश, जीवन र मरणबीचको कारूणिक द्वन्दहरू कैद गरिएको वृत्तचित्र प्रसारण हुन थालेको पाँच मिनेटमै दर्शकका आँखाहरू सल्बलाउन थालिसकेका थिए। जीजिविषा मानव जातिको प्राकृतिक चाहना हो। यसको नियन्त्रण कुन अदृष्य शक्तिले गरेको हुन्छ भन्ने विषय गौण हो तर मानिसले सक्ने भनेको मृत्युलाई सकेसम्म पर धकेल्ने नै हो। मानवजातिमा देखापरेको एउटा अकल्पनीय विपत्ति चीनले कसरी नियन्त्रणमा लिन सक्यो भन्ने विषय अहिले पनि खुल्ला किताबजस्तै छ। एक वर्षको अवधिमा यस्ता ज्ञानहरू संसारभरि फैलिसकेका छन्, तर बुझ्नु नबुझ्नु वा बुझ्पचाउनु अहंकार र दम्भको एउटा पाटो हुनसक्छ।
वुहानलाई एउटा नेपालको आकृतिका रूपमा परिकल्पना गर्ने हो भने हामीले कसरी कोरोनाबाट मुलुकलाई बचाउन सक्छौं भन्नेतिर घोत्लिन पनि सघाउँछ। कोरोना महामारीविरूद्ध वुहान २ महिना २ हप्ता २ दिन बन्द भएको थियो। त्यो लकडाउन कोरोना भाइरस नफैलियोस् भन्ने ध्येयले थियो। त्यसो भन्ने हो भने नेपाल र भारतको सीमामा अहिलेसम्म पनि लकडाउन गरिरहनुपर्ने हो। अझ त्यो भन्दा पनि कुन शक्ति वा भक्तिका लागि हो, भारतसँगका स्थल वा हवाई नाका निर्बाध खुल्ला छन्। सन् २०२० देखि हालसम्म पनि चीनले नेपालसँगका नाका सजिलै खोलेको छैन, खोले पनि निकै सावधानी अपनाइरहेको छ। यसको अन्तर्य के हो, प्रस्ट छ। नेपाल वा भारतका अधिकारीहरू बसेर सीमा क्षेत्रमा कसरी भाइरसको ‘चेन ब्रेक’को संयन्त्र बनाउन सकिन्छ भनेर छलफल गरेको कहाँ सुनिएको छ?
वृत्तचित्रमा देखिन्छ, महामारी नियन्त्रणका लागि राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेतृत्वमा संयन्त्रहरू चलिरहेका छन्। महामारीमा सर्वसाधारणको जीवनलाई महत्त्व नदिने र कामका लागि आलटाल/ ढिलासुस्ती गर्ने उच्च अधिकारीहरू तुरून्त बर्खास्त गरिएका छन्। नेपालमा त्यस्तो कानुन कतिखेर लागू भएको छ?
देशका विभिन्न स्थानबाट स्वास्थ्यकर्मीहरू परिवारबाट छुटेर वुहानतर्फको गाडी, जहाज वा रेलमा चढिरहेका छन्। आफन्तहरू आँसुँ चुहाउँदै बिदा गरिरहेका छन्। हामीले सम्झिरहेको हुनुपर्छ, उतिखेर भाइरसको भेउ पत्ता नलाग्दा मानिस जिउँदो वा मृत के भएर फर्किने भन्ने अन्योल थियो। कैयौँ दिनसम्म काममा गएर, सम्पर्क पनि गर्न नभ्याएको छोरालाई आमाले हकार्छिन्,‘कम्तीमा जवाफ त दिनुपर्छ, कहिले फर्किने त भन्नुपर्छ।’ महामारी नियन्त्रणको काममा जहाँ पल्टियो त्यहीँ निदाउनसक्ने गरी योद्धाहरू कसरी खटिएका थिए भन्ने कुरा जगजाहेर थियो।
एकजना युवतीले आफ्नो कथा सुनाउँछिन्, ‘भर्खरै बिहे गरेको श्रीमानले कि जागिर छोड्, कि मलाई छोड् (ली हुन्) भनेर धम्क्याए।’
समुदायमा मानिसहरू सागसब्जी नपाएर भौंतारिरहेका छन्। त्यहाँका रक्षकलाई भीडले गाली गरिरहेको छ। उसले आश्वासन दिन्छ, ‘धैर्य गर्नुस्, सरकारले हेर्छ।’
सागसब्जी, अन्नपातको चरम संकट परिरहेका बेला राज्यको जिम्मेवार निकायले व्यवस्थापन गर्छ। रातोदिन खटेर भोक, शोक टार्न मरिमेटेको देखर स्वयंसेवकप्रति बूढीआमैले कृतज्ञता प्रकट गर्छिन्। गाली सहेर सेवामा जुटेको युवा स्वयंसेवक धरधरी रुन्छ। उसको मुहारमा कस्ता तरंग/छाल उठ्छन्, त्यो त देखिँदैन। तर उसका रसिला आँखाले बूढीआमाको आशीर्वाद थापेको प्रस्टै देखिन्छ ।
चिकित्साकर्मीको हातेमालो बेजोड छ। सबैभन्दा कुनै पनि चिकित्साकर्मी संक्रमित नहुनका लागि डाक्टरका नेताहरूले सचेत गराइरहेका हुन्छन्। स्वास्थ्यकर्मी छन् भने मात्रै बिरामीको जीवन छ। नेताको आज्ञाबमोजिम चर्को गर्मीदेखि हिमपातको हिउँद ऋतुसम्म पीपीईमा टाँस्सिएका सेता मान्छेहरू सावधानीका साथ दिलोज्यान दिइरहेका छन्। राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनका रूपमा खुलेका चिकित्सा संघ, संगठनका नेतृत्वहरूले आफ्ना सदस्यको हौसलाका लागि, स्वास्थ्य अभावपूर्तिका लागि के कत्तिको दरिलो आवाज उठाएका छन् भन्ने त हाम्रोमा देखिएकै छ। महामारी नियन्त्रणको नेतृत्व राजनीतिले लिन सक्दैन भने स्वास्थ्य संगठनले यथोचित अख्तियारी मागेर आफै डट्नुपर्ने होइन र?
वृत्तचित्रको सार लिने हो भने महामारीका बेला राजनीतिक रामलीला रचेर मनोरञ्जन दिलाउने हाम्रो नेतृत्वप्रतिको वितृष्णा विस्फोट हुन्छ। सामाजिक सञ्‍जालभरि नेटिजनहरू भनिरहेका हुन्छन्, ‘घरि नेताले गरेन, घरि जनताले टेरेन।’
वास्तवमा महामारी नियन्त्रणका लागि नेपालसामु दुइटा किताब प्रकाशित छन्। लोकतन्त्रको नाममा जीवनमाथिको मजाक गर्ने वा मानिसको बाँच्न पाउने अधिकारलाई नै लोकतन्त्र भन्ने। लोकतन्त्रलाई लोकतन्त्र नै रहन दिने कि यसमा कुरूप रंग पोत्ने? कम्तीमा महामारीका बेलामा लोकतन्त्रको परिभाषा केही हदसम्म साँघुरो पार्नैपर्छ। यो मनोमालिन्यले हामीले धेरै आफन्त गुमाउने निश्चित छ।
डेढ घण्टाको वृत्तचित्र सकिएर सन्नाटा छाएको सिनेमा हलभित्र मानिसहरू बाहिरिन हतारिइरहेका थिएनन्। सबैजना स्तब्ध थिए र एक वर्षअघिको त्यो कहालीलाग्दो अवस्थामा फर्किएका थिए सायद। यतिखेर सिनेमा हलमा सामूहिक छिर्ने र प्रवेश गर्नसक्ने वातावरण सामान्य प्रयासले बनेको थिएन। वसन्त ऋतुको आगमन साना मेहनतले भएको थिएन। बाहिरिएपछि थाहा भयो, धेरै मानिसजस्तै आफ्ना सहकर्मीहरूको आँखा र नाकको टुप्पो पनि रातो रातो भएको थियो। मैले जिस्क्याएँ, ‘के बच्चाजस्तो रोएको? यस्तो रून लायकका घटना त जीवनमा कति आउँछन्, कति।’
उनले डस्टबिनतिर आँसु पुछेको टिस्यु पेपर फ्याँक्दै मतिर नहेरिकन भनिन्, ‘आत्म नियन्त्रणको शक्ति गुमाएँछु।’
आँखा यताउता ननचाएर वृत्तचित्र हेरेको भए म पनि सोही हालतमा हुन्थें होला। म रोएर मन कमजोर बनाउने पक्षमा थिइनँ। यतिखेर आफ्नै देशबन्धुहरूको हविगत वुहानको जस्तो भइरहेको छ। तर यस्तो कहालीमा पनि न नेतृत्व छ, न साधनश्रोत छ, न विज्ञहरूको सक्रियता छ जस्तो लाग्छ। सत्तामा रहनेहरूले भनिरहेका छन्, स्थिति सबै नियन्त्रणमा छ। सरकारले यो यो गरेको छ, त्यो त्यो गरेको छ।’
र, अघि स्थगित भएको भिडियो छायांकनको काममा हामी पुनः जुट्न लाग्यौं, ‘वाचाअनुरूप काम फत्ते गर्नु कुनै पनि शासक व्यवस्थापकको दायित्व हो।’
प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७८ १४:२७
३६ अक्सिजन प्लान्टमा सशस्त्र प्रहरी
काठमाडौँ — सरकारले निजी अक्सिजन प्लान्टको सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) लाई खटाएको छ । अक्सिजनको उत्पादन क्षमता र वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न एवं कालोबजारी रोक्न उद्योगमै सशस्त्रलाई खटाइएको हो ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहालले जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धितबाहेक महामारीको जोखिम रहेसम्म अन्यत्र अक्सिजनको खपत पूर्ण रूपमा रोक्न एवं जथाभावी भण्डारण नियन्त्रण गर्न उद्योगमै सशस्त्र प्रहरीलाई परिचालन गरिएको बताए । सशस्त्र प्रहरी खटिएपछि उद्योगमा कार्यरत कर्मचारीबाहेक अन्यलाई बिनाअनुमति प्रवेशमा पनि रोक लगाइएको उनको भनाइ छ ।
‘अक्सिजन नपाएर अस्पतालमा उपचाररत बिरामीले ज्यान गुमाउनु नपरोस्, घरमा रहेका अक्सिजन प्रयोगकर्ता बिरामीले पनि अस्पताल एवं चिकित्सकको प्रेस्किप्सनमा सजिलै सिलिन्डर भर्न पाउन् भनेर सशस्त्र प्रहरीलाई प्लान्टमै खटाइएको हो,’ उनले भने ।
प्रवक्ता दाहालका अनुसार अक्सिजन उद्योगमा चौबीसै घण्टा विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन पनि विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ । सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी राजु अर्यालले गृह मन्त्रालयको निर्णयका आधारमा उपत्यकाका ७ सहित देशभरका ३६ वटा अक्सिजन उत्पादक कम्पनीमा सशस्त्र प्रहरीलाई खटाइएको बताए ।
तीन जिल्लाका प्लान्टमै सेना
नेपाली सेनाले आफ्नो जनशक्ति खटाएर ५ वटा अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याएको छ । यी प्लान्टहरू काठमाडौं, काभ्रे र रूपन्देहीका हुन् । सेनाका अनुसार काठमाडौंको अक्सिटेक अक्सिजन प्लान्टमा ७ सैनिक खटाएर काम भइरहेको छ । जसको क्षमता ८० घनमिटर छ । काभ्रेको पनौतीस्थित नवज्योति अक्सिजन प्लान्टमा ८ सैनिक खटाइएको छ ।
जसले १५० घनमिटरका दुई वटा प्लान्ट सञ्चालन गरिरहेको छ । रूपन्देहीको छिपागढमा शंकर अक्सिजन प्रालिले प्रतिदिन ५५० थान सिलिन्डर र लुम्बिनी अक्सिजन उद्योगले प्रतिदिन २८८ थान तथा बागदुरास्थित लुम्बिनी अक्सिजन प्रालिले प्रतिदिन २८८ थान सिलिन्डर उत्पादन गरिरहेका छन् । यी प्लान्ट सञ्चालनमा हाल ३५ सैनिक खटिएका छन् । सेनाले कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रको निर्देशनमा उक्त काम गरेको जनाएको छ ।
सेनाले वैशाख २८ यता हवाई र सडकमार्फत सिलिन्डर ढुवानीलाई पनि तीव्रता दिएको छ । यस अवधिमा भरी र खाली गरी मुलुकभर ३८० थान विमानमार्फत र सडकमार्फत ५५० थान सिलिन्डर ढुवानी गरेको छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७८ १४:२४
स्वास्थ्यकर्मीले कहिलेसम्म कुटाइ खाने ?
एक प्यालेस्टिनी शरणार्थीको पीडा
स्वास्थ्य संकटका बेला, सरकार कहाँ छ ?
अझै पनि सोध्दैछन्, ‘चीनले कसरी नियन्त्रण गर्‍यो महामारी ?’
रिपोर्टरको डायरी : मास्कले छोपिएको पीडा